यसरी उठ्दै छ नेपालको धरहरा !
यसरी उठ्दै छ नेपालको धरहरा ! मुख्य विशेषता हेर्नुहोस
नंया दैनिकी शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८
नेपालको काठमाडौं सुन्धारामा वास्तुकला शैली मुगल र ‘नियोक्लासिकल’ शैलीमा बनेको थियो धरहरा। धरहरा नेपालको राजधानी काठमाडौंको सुन्धारामा अवस्थित नौतले आकारको स्तम्भ थियो। १९९० सालभन्दा पहिला यसमा ११ तला थियो। यसको बार्दली नवौं तलामा रहेको थियो। १९९० साल माघ २ मा आएको महाभूकम्पले बार्दलीभन्दा माथिको १० र ११ तला भत्किएको थियो र नवौं तला रहेको थियो। २०७२ वैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पले यो पूर्णरूपले नष्ट भई इतिहास बन्न गएको सर्वविदितै छ।
धरहराको निर्माण १८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएका थिए। थापाले रानी ललितत्रिपुरा सुन्दरीको आदेशअन्तर्गत धरहरा बनाउन लगाएका थिए। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा निर्माण गरिएकाले धरहरालाई ‘भीमसेन स्तम्भ’ पनि भनिन्छ। सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना र जानकारी दिन तथा भेला गराउन पहिले धरहराको टुप्पोबाट बिगुल बजाउने गरिन्थ्यो। बिगुल बजेको सुनेपछि जंगी, निजामती कर्मचारी कोत वा टुँडिखेलमा जम्मा हुनु अनिवार्य थियो।
टावरमा २१ वटा तला भएको एक घुमाउरो सिँढी थियो। आठौं तलाले पर्यवेक्षकका लागि गोलाकार बालकनी राख्यो, जसले काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्य प्रदान गर्‍यो। यसको छतमा २.२ मिटरको काँसाको मस्तु पनि थियो।
अहिले बन्दै गएको नयाँ धरहराको कूल लागत तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। साइजमा ठूलो, उचाइमा अग्लो भएपछि यो त भ्युटावर हो।
पहिलो टावर १८२४ सालमा निर्माण गरिएको थियो र एघार तला माथि थिए, धरहराभन्दा दुई तला ठूलो थियो। १८३४ सालको भूकम्पको समयमा दुवै स्तम्भ केही भएनन् बाँचे तर भीमसेनको दुई टावरमध्ये पहिलो ठूलो क्षति भयो। एक शताब्दीपछि, १९३४ मा अर्को भूकम्पले पहिलो स्तम्भलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त गर्‍यो र दोस्रो स्तम्भका नौ तल्लामध्ये केवल दुई बाँकी रह्यो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पछि धरहरा स्तम्भको मर्मतसम्भारको काम पूर्णरूपमा गरे। मूल भीमसेन स्तम्भ नष्ट भएपछि, रानी ललित त्रिपुरसुन्दरीको धरहरा भीमसेन स्तम्भ भनेर चिनिन थाल्यो। धरहराको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा शिवलिंग थियो। टुप्पोमा गजुर रहेको ऐतिहासिक स्मारक धरहरा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। धरहराको निर्माण मुगलशैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल पनि सोही शैलीमा निर्माण गरिएको छ। धरहराको निर्माण इँटा र बज्र (सुर्की, चुन, मास र चाकुको मिश्रण) बाट भएको थियो।
अप्रिल २०१५ मा ७.८ रेक्टर स्केलको अनुमानित तीव्रताका साथ अर्को भूकम्पले काठमाडौं र यसवरपरको क्षेत्रलाई प्रभावित गर्‍यो र स्तम्भ ढल्न पुग्यो। फेब्रुअरी २०१६ मा सरकारले धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले पुनर्निर्माणमा एक महिनाको तलब दिए। पुनर्निर्माणका लागि पैसा संकलन गर्न ‘मेरो धरहरा म निर्माण गर्नेछु’ भन्ने कोष पनि स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार नयाँ टावर भूकम्प प्रतिरोधी हुने बताइएको छ। नयाँ टावरको आधारशिला २७ डिसेम्बर २०१८ मा राखिएको थियो।
धरहराको पुनर्निर्माण, जुन अब एक उच्च प्राविधिक संरचनासहितको हुनेछ, को निर्माण १० अक्टोबर २०१८ मा सुरु भएको हो। नयाँ धरहरा पुरानोजस्तो देखिन्छ, यद्यपि यो आधुनिक सुविधाबाट समेत सुसज्जित हुनेछ। पुनर्निर्माण योजनाअनुसार नयाँ धरहरा ११ तले २४५ फिट अग्लो हुने भए पनि यो भित्री भागबाट २१ तलाको हुनेछ। नयाँ संरचनामा १८ औं फ्लोरमा एक मिनी प्रदर्शनी थियटर, एक टक्साल संग्रहालय, एक ‘ग्रीन पार्क’, एक म्युजिकल फाउन्टेन, गाडी पार्किङ क्षेत्र, एक स्मारिका पसल र खाना कोर्टलगायत अन्य आकर्षण रहेको हुनेछन्।
‘नयाँ धरहरा धरहरा होइन, तर टावर हो’ भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन्।
फेब्रुअरी २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म मेरो धरहरा निर्माण गर्नेछु’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि धन संकलन अभियान फेब्रुअरी २०१६ मा घोषणा गरेको थियो, जुन सम्पदा पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्यक्रम थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाले जनतामा आशा जगायो। धेरैले सोचे– ध्वस्त भएका धरहरा पुननिर्माण हुनेछन्। पुरानो धरहराको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण गरिएको सबैभन्दा सामान्य प्रतीक बनेको छ ‘फेरि राम्रो बिल्डिङ’ र ‘हामी फेरि उठ्नेछौं’ जस्तो तपाईंले केही वर्षअगाडि मात्रै ‘ग्राफिटिस’ र ‘टी–सर्ट’ मा देख्नुभएकै होला। तर सम्बन्धित अधिकारीले योजना बनाउन थालेपछि उनीहरूले पुरानो घरको पुनर्निर्माणको सट्टा ‘नयाँ धरहरा’ निर्माण गर्न थाले। यसले सबै आशालाई चकनाचूर पारिदियो। यसबाहेक सम्पदा संरक्षणसँग तालुक राख्नेहरूले भने– नयाँ भवनले कुनै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व राख्न सक्दैन। पुरानोलाई चम्काउने र नयाँ प्रविधिले टल्काउने प्रधानमन्त्रीको अभिलाशा रहेको सार्वजनिक समारोहमा अभिव्यक्त भएका छन्।
इतिहासको सर्सर्ति समीक्षा गर्दा देखिन्छ– पहिलो बहस नयाँ टावरलाई के भन्नेबारेमा थियो। अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा परियोजनाको नाम ‘ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण’ शीर्षक दिएका छन्।तर टिप्पणीकार र आलोचना गर्ने कार्यकर्ता भन्छन्– यो धरहराको ‘पुनर्निर्माण’ होइन; जुन मानिसलाई थाहा थियो, बरु पूर्णरूपमा नयाँ भवन निर्माण जुन आज भूकम्पले ग्रस्त धरहराको अवशेषको छेउमा खडा छ।
धरहरालाई पहिले नै ‘भीमसेन मूर्खता’ भनिएको थियो यो निर्माणपछि। किनकि यो काठमाडौं र यहाँसम्म कि नेपालको वास्तुकला प्रकृतिविरुद्ध थियो र अब हामी पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छौं भन्ने भनाइप्रति कतिको सत्यता छ, त्यो समयले बताउला।
भीमसेन थापा मेमोरियल फाउन्डेसनका केही पदाधिकारी पनि भन्छन्, ‘यो धरहरा होइन। यो ओली टावर हो।’ यसैबीच धेरैले यसलाई झिल्के (चम्किलो) टावर पनि भनिरहेका छन्’ भन्ने अभिमत राख्नेहरू अहिले पनि छन्।
ऐतिहासिक स्मारकहरूको नक्कल गर्ने सम्बन्धमा शर्त र दिशानिर्देशहरू छन्। ‘धरहरा र नयाँ टावरका सम्बन्धमा अधिकारीहरूले पहिलेको धरहराको आकार बढाएर उक्त क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरेका छन्। नयाँले पैसा कमाउने अभिप्रायलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ, जुन उपभोगवादी संस्कृतिको उपज हो।
धरहराका स्मारक पार्कका रूपमा मात्र पर्याप्त हुन सक्थ्यो। यो गुमाएका जीवन र हाम्रा निर्माणहरूको सफलताको सम्झना हुने थियो। वा हुलाक कार्यालय भवन, नेपालको पहिलो आधुनिक वास्तु भवन संरक्षण गर्न प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। उक्त ठाउँ खाली गर्न सक्थे र यसलाई पहिलेको जस्तै ग्रेटर टुन्डिखेलका रूपमा घोषणा गर्न सक्थे। यो काठमाडौं उपत्यकामा जनताको अभाव भएको खुला ठाउँ दिने तरिका हुन सक्थ्यो।
यसका आलोचकले दिएको कारण यो हो– अघिल्ला सबै धरहरा ठूलाठूला भूकम्पमा गिरे र तिनीहरू नयाँ टावरलाई कंक्रिटसहित मजबुत बनाउन चाहन्थे’ सिमेन्टको टिकाउ के हो ?’ इन्जिनियर र कामदारलाई थाहा छैन। ठूलो प्रश्न यो हो : दर्शकले दृश्य टावरबाट हेर्न सक्ने दृश्य कहाँ छ ?
‘यो परियोजना सकिएपछि हामी के हेर्दैछौं ? दृश्यका लागि टावर चढ्न ती भिन्न मत राख्नेहरू भन्छन्, ‘तर हामी के भन्छौं भन्ने दृश्य। काठमाडौंको कंक्रिट जंगल प्रदूषित भएको छ। त्यहाँ कुनै दृश्य छैन। त्यहाँ अवलोकनको आवश्यक छैन वा भनौं अवलोकन गर्न लायक केही छैन।
धरहरामा काम २२ वटा फ्लोरमा पुग्दा २२–मञ्जिला ऐतिहासिक स्मारकको पुनर्निर्माण पूरा हुन लागेको छ। टावरमा कामका साथसाथै अन्य संरचना जस्तै– ट्रिपल बेसमेन्ट, चारतले संग्रहालय एकैसाथ निर्माण हुँदैछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) अन्तर्गत कार्यरत युरोपियन युनियन टेक्निकल सपोर्ट टिमले तदारुकताका साथ कार्य गरेको छ।
यसभित्र दुई लिफ्ट र सिँढी हुनेछ। यद्यपि एनआरएले पुरानो धरहरा संरक्षणसम्बन्धी काम सुरु गर्न सकेको छैन र बाँकी रहेकाले गिलास केसमा राख्ने योजना बनाए।
धरहरा टावर प्राइम क्षेत्रमा अवस्थित छ। धरहरानजिकको सम्पदास्थलका साथ सय मिटर टाढा यो २० आबासीय सहवाणिज्य स्थान हो। आबासीय एकाइ, बेडरुम कन्फिगरेसनको साथ आन्तरिक सहर जीवनशैलीअनुरूप डिजाइन गरिएको छ। एकाइहरू बैठक कोठा, भान्छा÷भोजन, बाथरुम र धुलाइका साथ आउँछन्। जे होस्, यी एकाइ तपाईंको आवश्यकताअनुरूप वाणिज्य ठाउँका रूपमा पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ।
सहरका बीचमा अवस्थित सिभिल मलबाट तीन सय मिटरको दूरी, धरहराको विरासत साइटबाट सय मिटर टाढा अवस्थित छ।
नेपाल विद्युत् प्रधिकरणबाट विद्युत्, केन्द्रीय लिफ्ट, लिफ्ट र सामान्य क्षेत्रका लागि जेनरेटर ब्याकअप, चौंडा सडक अन्तक्र्रिया ब्लकका साथ ढल निकास लाइन, आगो ‘एस्केप स्टेयरकेस’ आदि सुविधा प्राप्त हुनेछन्।
समुदाय सुविधाअन्तर्गत पार्किङ ठाउँ, घडी सुरक्षा, सीसीटीभी निगरानी, फूलको ओछ्यान र सिट आउटबाट खुला ठाउँ आदि प्रमुख छन्।
बीस आवासीय सहवाणिज्य स्थान समावेश गर्छ। परम्परागत सुर्खी मोर्टारका साथ आधुनिक समकालीन लुकको फ्युजन, आवासीय एकाइ भित्री–सहर जीवनशैलीअनुरूप डिजाइन गरिएको भनिएको छ।
यस्तै धरहरापरिसरभित्र एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने तीन तलाको पार्किङ स्थल निर्माण भएको छ। त्यसबाहेक टक्सार संग्राहलय, भूकम्प संग्राहलयलगायतको संग्राहलय रहने भवन निर्माण भएको छ।
धरहराको कूल लागत भ्याटसहित तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ छ। धरहराको कूल क्षेत्रफल ४२.२ रोपनी रहेको छ।
धरहरा पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण ?
धेरैले नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रविधिले ढलान गरेर बनाएको धरहरालाई पुनर्निर्माण भन्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भीमसेन थापाले बनाएको धरहराभन्दा धेरै कुरामा फरक (ठूलो, अग्लो, फराकिलो) भएकाले यसलाई ‘भ्युटावर’ को संज्ञा दिएका छन्। त्यस्तै केहीले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा यस संरचनाले मानिसको ज्यान लिने हो कि भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहरा : म बनाउँछु’ अभियान सुरुवात गर्दै जनताको साइड वकर्सको जिम्मा जनतामा थोपरिदिए। ‘धरहरा बनाउन विदेशी पैसा खर्च गर्दैनौं। धरहरा सरकारी खर्चबाट पनि निर्माण गर्दैनौं। यो जनताको खर्चमा बन्ने हो’, भूकम्पले ढालेको धरहराको ठूटोछेउमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यसका लागि सबै नेपालीले संकल्प गर्न आवश्यक छ। सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा धरहरा कसले बनायो भन्दा मैले बनाए भन्ने हुन्छ।’
अभियानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब राखेर छुट्टै खातासमेत खोलिएपछि जनताको सेन्टिमेन्ट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘क्याच’ गरे। धरहरा ढलेर मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा स्मारक राख्ने र संग्रहालय बनाउने भनेपछि एक किसिमले थुप्रै मानिस भावनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा उभिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अभियानका लागि मुलुकभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए।
सम्पदा अभियान्ताका अनुसार अहिले बन्दै गरेको धरहरामा काठमाडौंमा दिनहुँ भारी बोक्ने मजदुरको पनि पसिना परेको छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले अभियान घोषणा गरेपछि धरहराका लागि रकम संकलन कार्य भएको थियो। यसमा काठमाडौंमा दिनहुँ भारी बोकेर गुजारा गर्ने मजदुरले पनि पैसा दिएका थिए। तर अब नयाँ संरचना बनेपछि उनीहरूले नै पैसा तिरेर चढ्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन।
२०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहरा : म बनाउँछु’ अभियान सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा बलियो बनाउने प्रण गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अब बन्ने धरहरा हेर्दा पहिलेको जस्तै देखिने तर भूकम्पले नढल्ने बलियो हुनेछ।’
उनको अभिव्यक्ति धेरैलाई सकारात्मक लाग्यो। तर जब धरहराको स्केच सार्वजनिक भयो, तब भने धेरैले अनुमानभन्दा भिन्न स्केच देखे। भूकम्पले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी स्केच वा नक्सा तयार भएपछि विवाद सुरु भयो। किनकि बनाउन लागिएको नयाँ संरचनालाई धरहराको नाम दिइए पनि त्यो आधुनिक भ्युटावर भन्दा फरक थिएन।
‘मेरो धरहरा : म बनाउँछु’ अभियान थालेको एक वर्षपछि नक्सा बनेको थियो। कन्सल्टेन्ट कम्पनी एमआरबी एसोसिएट जेबीले तयार गरेको स्केच पुरातत्व विभागलाई २०७३ चैतमा हस्तान्तरण गरेको थियो। ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको नयाँ धरहराको उचाइ २ सय ४५ फिट अग्लो तथा लिफ्टबाट जाने गरी ११ तले थियो। त्यस्तै दुई हजार ७० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने तीनतले अत्याधुनिक पार्किङ र अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संग्रहालयसमेत बनाउने योजना थियो। जबकि पुरानो धरहरा धरहराको उचाइ ६१.८८ मिटर (२०३ फिट) थियो। धरहराभित्र २१३ सिँढी र बाहिर २५ सिँढी थियो। धरहराको १८८ सिँढी उक्लेपछि बार्दली आउँथ्यो। नवनिर्मित धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई समेत समेट्यो।
नक्सा तयार भएको दुई वर्षपछि मात्रै निर्माण सुरु गर्न शिलान्यास भयो। २०७५पुस १२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धरहराको शिलान्यास गरेका थिए। त्यससमय पनि विवाद उब्जिएपछि ओलीले शिलान्यास कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले विज्ञसँग छलफल गरी बनाउन लागेका हौं। देशमा अब विकासको लहर लागेको छ। हाम्रा निर्माणका काममा आधुनिकता टल्कनुपर्छ। यसमा कि सघाउनु, सघाउन नसके चुप लाग्नु।’
पुरानो धरहरालाई बेवास्ता; नयाँ भ्युटावरको गुणगान
अहिले बन्दै गएको नयाँ धरहराको कूल लागत तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। साइजमा ठूलो, उचाइमा अग्लो भएपछि यो त भ्युटावर हो। काठमाडौंमा यो क्रंकिटको भ्युटावर अनुपयुक्त रहेको ठहर गर्नेहरू पनि छन्। केही व्यक्तिको मतअनुसार ग्रेटर टुँडिखेलको एउटा अंशका रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्थ्यो। किनकि भूकम्पले हामीलाई खुला ठाउँको महत्त्व कति छ भनेर बुझाइदिएको थियो। त्यसलाई केवल पार्कका रूपमा विकास गरेको भए हुने थियो भन्ने मत राख्ने पनि छन्।
अप्रिल २०१५ मा ७.८ रेक्टरको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंमा धेरै संरचना ध्वस्त पार्‍यो। उक्त भूकम्पमा टावर अधिकांश रूपमा ध्वस्त भयो र धरहराको आधार मात्र बाँकी रह्यो।
भूकम्पको तीन वर्षपछि मात्र धरहराको पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। टावरको पुनर्निर्माण अक्टोबर २०१८ मा सुरु भयो। जे होस्, यो बाहिरबाट ११ मञ्जिलाजस्तो देखिनेछ। नयाँ धरहरा पहिलेभन्दा फराकिलो हुनेछ, जसले ४२ रोपनी जग्गा ओगटेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८, ०८:०८:००